ဒါဝိဒ်သည် Luiz - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ "ဒါဝိဒျ Luiz
Tele RELAY တစ်ခု 25 သြဂုတ်လ 2019
လီဗာပူးအသင်း, အင်္ဂလန် - ဒါဟာတူသောင် ဒါဝိဒ်သည် Luiz သူသညျမိမိအမှားအသိအမှတ်ပြုရန်ကိုယ်ကျင့်တရားမလှူတဲ့မျိုးခံစားခဲ့ရသူပြုသမျှသောအရာကို၏ထိခိုက်ပေါ့ဆခြင်းဖြင့်ဒါရှက်ခံစားခဲ့ရလေသည်။ 19659002-1 အောက်ပိုင်းရမှတ်နီးပါးမတ်တပ်ရပ်ပေမယ့် 0] ဒုတိယတစ်ဝက်တစ်ဦးနွေးထွေးသောနွေရာသီ, Anfield နှင့်အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်နှစ်မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ထိုသို့ဤအချိန်တွင်ခဲ့သည် မိုဟာမက် Salah တစ်ဦး avid ကူးသော့ခတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ ရောဘတ် Firmino Luiz နှင့်အသိလီဗာပူးအမှတ် 11 ၏ရှပ်အင်္ကျီ tugged ။ အဆိုပါဘရာဇီးအနီရောင်ထည်ကိုဆန့ ်. သူ၏ပြိုင်ဘက်၏ဂျာစီဖြစ်ကောင်းအားကစားကွင်း၏ကြီးမားသောပင်မရပ်၏နောက်ကျောတန်းမှမြင်နိုင်ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာတဲ့လက်သီးချုပ်ကိုင်ထားရှိပါတယ်။ Stockley ပန်းခြံမှတရားဝင်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုရာသီတစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင်နယ်တီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
- အာဆင်နယ်၏အရွယ်အစား: Pepe ကတိပေးထားပေမယ့် Luiz3/ 10
- Reddy: Salah အာဆင်နယ်အသင်းလမ်းမပေါ်တွင်လီဗာပူး၏အတန်းကိုပြသ
အန်သိုနီတေလာဒိုင်လူကြီးနှိုးဆော်ရန်စတင်ဖို့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီ Luiz ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ပြစ်မှုပရိယာယ်လက်ညှိုးကိုနှိုးဆော်သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းတက်ရဖို့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တွေ့မြင်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့် Luiz ရိုးရှင်းစွာလေထုထဲတွင်မိမိလက်ျာလက်ထမြောက်တော်မူပွင့်လင်းအုန်း, အဖြစ် သူပြုသမျှဘယ်အရာကိုသတိပြုမိခဲ့လျှင်။ ဤမျှလောက်ကမဟုတ်ရင်ဟန်ဆောင်မှအသုံးမကျခဲ့တာကြောင့်အော်ဟစ်ခဲ့သည်။
"ဟုတ်ကဲ့, တကတရားမျှတရဲရဲ့" ဟုသူကပြောသလိုပဲ။ "ငါသည်ဝမ်းနည်, ငါသည်ဒါဝိဒ်သည် Luiz ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ငါလုပ်ပေးလေ့ယျ။ "
တေလာရဲ့ပီပီတံပိုးမှုတ်သောအခါနှင့် Salah ပွဲချင်းပြီးဘောလုံးကိုအားမရ, လက်ဝဲဘက်ကျွမ်းကျင်စွာခေါက်, ကြွင်းသောအရာကိုပြု၏။ ရှေ့ဆက်ဗိုလ်ခြေနှစ်ဆ post ။ နောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်နေဆဲ Luiz ခဲ့ 10 မိနစ်နှင့် - ဒါဟာကစားပွဲကျော်ခဲ့လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
သူစုဝေးပိုင်ခွင့်မှခေါင်းနှစ်လုံးအဖြစ်သူ၏အခြမ်းမှာအာဆင်နယ်ဗဟိုနောက်ခံလူ detect Fabinho '' တစ်ဦးအကြမ်းဖက်သပိတ်ပြီးနောက် Salah ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်တစ်ဦးထိတွေ့ ယူ. ထို့နောက်နောက်ကွယ်မှအစိမ်းရောင်မြက်ဟက်တာအတွက် Luiz ကိုစေလွှတ်။ , အမွေးဆံပင်နှင့်အတူဗဟိုနောက်ခံလူသူမဆိုအမှားကျူးလွန်ခဲ့ပြသရန်သည်မိမိလက်ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ Nacho Monreal Salah နှင့်အီဂျစ်အောက်ခြေဘယ်ဘက်ထောင့်သို့ချက်တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုမီဧရိယာသို့တဟုန်တည်းပြေးဖမ်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
Luiz 41e မိနစ်မှလီဗာပူး၏ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်များအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပလို့မရပါ။ မြင်ကြ ယောလ Matip outmuscle Sokratis Papastathopoulos ဦးခေါင်း Trent အလက်ဇန္ဒား-အာနိုး ထောင့်ပြီးနောက် Bernd Leno ။ ဒါပေမယ့်ဒုတိယကာလ၌သူ၏ cameo သူ Locker အခန်းယူဆောင်အပေါငျးတို့သကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိနေသော်လည်းနှင့်သူ၏အသေခံအာဆင်နယ်အသင်းအတိုက်အခံစာနယ်ဇင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ကစားရန်ကူညီပေးပါမည်အကြောင်း, တစ်ဦးဆိုးအမှားများ၏အန္တရာယ်ဝေးဘယ်တော့မှကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဝေးလွှဲပြောင်းနောက်ဆုံးနေ့၏နေ့၌ချယ်လ်ဆီးတစ်စမတ်နှင့်အခွင့်အရေးယူကိစ္စကဲ့သို့အထင်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ကသာ 8 သန်းပေါင်ကုန်ကျမယ့်အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းကအာဆင်နယ်ဒါဝိဒ် Luiz ၏အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလုံးအကျဉ်းချုပ်။ ယခု: ရုံမလုံလောက်ဘူး။ ဓာတ်ပုံ Chloe Knott - Danehouse / Getty Images
ပထမဦးဆုံးလီဗာပူးလ်ရည်မှန်းချက်မီ, Unai Emery အာဆင်နယ်၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, သူ့နည်းဗျူဟာJürgen Klopp ၏အသင်းဖျက်ဖို့စီမံခဲ့သောအတိုင်းအတာအပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ Klopp နောက်ပိုင်းမှာအံ့အားသင့်ရှိခြင်းဝန်ခံတဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းရေး 4-3-1-2 ၌ကျိန်းဝပ်။ နှင့် Pierre-Emerick Aubameyang နှင့်ပြည့်စုံအစပြုသူ က Nicolas Pepe တစ်ဦးရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားနွေဦးနှစ်ဦးကိုကိုသိမ်းယူပြီး, ထိုဧည့်သည်တစ်ဦးအနိမ့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ကာကွယ်သည့်ကွင်းလယ်ထုပ်ပိုးနှင့်ချိုးအပေါ်၎င်းတို့၏လျင်မြန်ကစားသမားမတိုင်မီလွှတ်ပေးခံရဖို့ရှာကြံ။ Records ကိုအာဆင်နယ်လီဗာပူးလ်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရွားလှခဲ့ကြပေမယ့်တခါအဘို့, သူတို့ halftime မတိုင်မီပျံနေပါတယ်ရှောင်ကြဉ်။
Pepe ပင် dribbling ၏ရှားပါးသော feat စီမံခန့်ခွဲ အတွက် Virgil ဗန် Dijk midline သူ့ကိုကတည်းကပရီးမီးယားလိဂ်ဂိမ်းထဲမှာခံ့ညားဒတျချြကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည့်ပထမဆုံးကစားသမားကိုဖန်ဆင်းသတ္တမတစ်မိနစ်အတွက်ရည်မှန်းချက်အပေါ်သူ၏ရိုက်ချက် Mikel Merino မတ်လ 2018 အတွက်နယူးကာဆယ်။
အဆိုပါအိုင်ဗရီကို့စ်တောင်ပံကစားသမားအာဆင်နယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးစံချိန်တင်ကိုင်ဆောင်သူ 72 သန်း, Burnley ဟာဆန့်ကျင် 2-1 အောင်ပွဲကာလအတွင်းတစ်ဦးအစားထိုးနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေကဲ့သို့မိမိလက်ဆောင်တွေရှေ့ပွေးပုံရိခဲ့သည်။ ဒါဟာ Anfield, လူထုများ၏အန္တရာယ်အရှိဆုံးကစားသမားမှာကဒီမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပင်နယ်တီဧရိယာထဲကနှစ်ကြိမ်ခြိမ်းခြောက်ပြီးနောက်သူ created - ထိုအခါမူကားလုယူ - ပထမတစ်ဝက်တွင်တစ်ဦးတောက်ပအခွင့်အလမ်း, miskick ၏ဖမ်းဆုပ် ယော်ဒန်မြစ် Henderson နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံလောက်သောမဖွင့်ရှေ့တော်၌အနြေ္ဒ Robertson ကဝင်။ လက်ျာခြေမအပေါ်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုထား Adrian ။ မကြာမီတွင် halftime မီ, Robertson ကမှားဦးတည်သည်မိမိသွားရာလမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သူ၏ပြိုင်ဘက် Burnley ဟာဆန့်ကျင်တီးခတ်ထားပြီးအပြီးအာဆင်နယ်အနေဖြင့် Daniely Ceballos တတိယသစ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနီးပါးရည်ရွယ်ချက်ပေးခြင်း, သေနတ်ခဲ့သည်။ Sadio လည်ဆံ သူ့ကိုယ်ပိုင် box ကိုဖြတ်ပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ pass အတူဖို့လမ်းမပေးခင် လူးကပ်စ Torreira ။ ရုံနာရီအကြာတွင်ဒါဟာကွင်းလယ်မျက်နှာ Burnley ဟာ Sean Dyche အတွက်ရုန်းကန်ဖို့တစျခုအရာပါပဲ, ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြေပြင်ပေါ်တွင်ဥရောပချန်ပီယံဆန့်ကျင်လုပ်ဖို့အခြားအရာပါပဲ။ ဝေးမြေမှ Ceballos ကကွင်းလယ်အတွက်လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက်အထင်ကြီးအာမခံသော့နဲ့အချို့သောပုဒ်နှင့်အတူဟောင်း 20 နှစ်ပေါင်းအကယ်ဒမီ၏ဤဘွဲ့ရဂိမ်းကစားရန်ဂျိုး Willock များအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Emery Willock နှင့် Pepe ခွဲခြား Matteo Guendouzi ဟုသူကဆိုသည်, "ရှေ့ဆက်မယ့်ခြေလှမ်းကိုဖန်ဆင်း" ခဲ့သူသုံးကစားသမားအဖြစ်
"Ceballos ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထက်ပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်" ဟုအဆိုပါမန်နေဂျာဝန်ခံပေမယ့်သူ့ကိုပိုတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ အတူ "19659002] Alexandre Lacazette ဒေသခံထောက်ခံသူများ Anfield လမ်းမကြီးရပ်ရပ်ဟာပရိသတ်ခုံတန်းလျား, ပြင်သစ်ရှေ့, Pepe နှင့် Aubameyang မြင်နေမတိုင်မီ 81e မိနစ်အားမိမိနိဒါန်းအဘို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းအဘို့သက်သာရည်မှန်းချက်ပဲလေးမိနစ်အကြာတွင်သို့ရောက်လာသည်ကား, ထို့နောက် Henderson သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအားထုတ်မှုတားဆီးပြီးမှဒုတိယကြိုးပမ်းမှုမှာသွင်းယူခဲ့သူဘောလုံးကို qu'Aubameyang Torreira, အပ်ပေးတော်မူ၏။
အာဆင်နယ်ပထမဦးဆုံးကာလ၌သူ၏ကတော့အောင်မြင်မှုမရသေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သူ၏နှောင်းပိုင်းကပြန်လည်နာလန်ထူ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနိုင်တယ်လို့နေစဉ်, Emery ကြောင့်လည်းဘောလုံးအသင်းက၎င်း၏ကစားသမားအဖြစ်ကောင်းသောဘယ်တော့မှခဲ့ကြောင်းသတိပေး "ဇာတ်ကောင်" ၏သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်တင်ပြ နိမ့်ဆုံး။ ဤအနေ့လည်ခင်း၏တဦးတည်းဖြတ်သန်းယင်းအားနည်းကစားသမားသည်ဒါဝိဒ် Luiz ထိုသို့သောအခါ, ပင်အများဆုံးဂရုတစိုက်ထားကြ၏အစီအစဉ်များနှမျး၌ကျန်ကြွင်းစေနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/english-premier-league/story/3926829/david-luizs-shocker-proves-its-the-same-old-calamitous-arsenal
ခြေလျင် OM - OM: Luiz ဂူစတာဗိုလွှဲပြောင်းဝင်းဒိုးကိုချွတ်ရောင်း Marseille ဖဲချပ်ကစား! - ခြေလျင် 01
လူမျိုးရေးအလွဲသုံးစားမှု Rashford သားကောင်, Ole
ဗေဒင်: အဘယျသို့ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုစက်တင်ဘာလ 16 ကောင်းတစ်ခုရက်သတ္တပတ်ရပါလိမ့်မယ် - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG
ခြေလျင် ol - ol: အဘယ်သူမျှမ, Juninho လိုင်ယွန်အတွက်လွှဲပြောင်း window ၏သူဌေးမဟုတ်ပါ! - Olympique Lyonnais - ခြေလျင် 01
Ric Ocasek, 75 နှစ်ပေါင်းမှာသေလွန်သောသူတို့သည်တွေ့ရှိခဲ့အဆိုပါကားများအဆိုတော် - လူတွေ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,487